PressReader - Ilanga: 2018-07-09 - Mayibekwe eceleni eyobuhlanga, kubhekwe ikhono
Mayibekwe eceleni eyobuhlanga, kubhekwe ikhono
Ilanga - 2018-07-09 - Imibono - UMBONO WOMHLELI PHILANI MGWABA philani@ilanganews.co.za
NJENGOBA imidlalo kanobhutshuzwayo esingethwe yiFifa isiya ngasemaphethelweni, kukhona abantu baseNingizimu Afrika abangakufunda ngendlela amanye amazwe akhetha ngayo abadlali bamaqembu esizwe.
Sekuwumlando manje ukuthi amaqembu esizwe abemele i-Afrika kulo mqhudelwano; okuyiSenegal, iNigeria, iTunisia, i-Egypt neMorocco, aphume ekuseni, okujabhise abaningi bakuleli zwekazi.
Lokhu kwenze abanye bethu baxhasa iqembu lesizwe laseFrance ngoba bebona ukuthi iningi labadlali bakhona bayisizukulwane sabantu abadabuka e-Afrika.
Lokhu kuveza ngokusobala inhlese yobuhlanga esekhona emicabangweni yethu, esenza sibuke iqembu esilithwala ngeqoma ngeso lobuhlanga kuqala kunokubheka ukuthi lidlala ngendlela esiyizwa ngaphakathi yini noma cha.
Okunye okuqaphelekayo uma ubheka iqembu lesizwe laseFrance, okuyisizwe sabamhlophe, wukuthi kwenzeka kanjani ukuba ingxenye enkulu yamalungu alo kube ngabantu kuleli esingababiza ngabampisholo.
Njengoba sonke sazi, kuleli lakithi yinto ebalulekile ukuba iningi lamalungu eqembu lesizwe kube ngabampisholo ngoba abanye bethu - kuhlanganisa nohulumeni imbala - bekholwa wukuthi njengeningi ezweni, kufanele futhi sibe yiningi kuyo yonke imikhakha, kuhlanganisa neyemidlalo.
Uma nje sibheka amaqembu esizwe amabili; elebhola lombhoxo ( rugby) nelekhilikithi ( cricket), kuhlale kunezinkulumo zokuthi agcwele abamhlophe, kawanawo amalungu anele abantu abampisholo, ngakho kufanele kube nezinguquko ngokushesha ukulungisa lesi simo.
Abanye bethu baze balibeke ngembaba elokuthi kabanandaba noma la maqembu esizwe ayaphumelela yini noma cha emidlalweni yawo, inqobo nje uma iningi lamalungu awo kungabantu abampisholo, kulungile.
Okubalulekile kulabo abanalo mbono, wubuhlanga bomuntu, hhayi ukuthi umuntu unekhono elingasiza ekubeni amaqembu ethu aphumelele uma eqhudelana namanye amazwe.
Uma iFrance ibingalandela indlela abanye bethu abacabanga ngayo, ngabe iqembu lesizwe likanobhutshuzwayo elimele leliya lizwe eRussia ligcwele iningi labamhlophe.
Ngabe kakubhekwanga kakhulu ukuthi abadlali banekhono yini kulo mdlalo noma cha.
Sekuwumlando manje ukuthi iFrance yenza kahle kakhulu kule midlalo yeFifa njengoba isifinyelele kowandulela owamanqamu ( semi-final), okuyibeka ethubeni elihle lokuba iwine indebe yalo mqhudelwano owenzeka njalo emuva kweminyaka emine.
Yini esingayifunda ngendlela iFrance eqhuba ngayo ezemidlalo?
Uma sizoba yizwe eliphumelelayo kwezemidlalo, singafunda lukhulu kuleliya lizwe nakwamanye amazwe aqhakambisa ikhono lomdlali nokunqoba umqhudelwano, ibekwe eceleni indaba yobuhlanga bomuntu.
Yebo khona kuhle ukubona banda abampisholo bakithi emidlalweni efana nombhoxo nekhilikithi, kodwa lokhu kakufanele sikubeke phambili, sivumelane nokucwaswa kwezakhamizi zakuleli zelinye ibala ngoba nje sifuna ukuba kube yithi esibaningi kule midlalo, singabheki ikhono lomuntu nomuntu.